कौन बनेगा करोडपतिका निर्माता र होस्ट अमिताभविरुद्ध एफआईआर दर्ता
विराटनगर, १८ कात्तिक । कौन बनेगा करोडपति–१२ (केबीसी)का निर्माता र होस्ट बलिउडका चर्चित अभिनेता अमिताभ बच्चनविरुद्ध एफआईआर दर्ता भएको छ ।
सामाजिक अभियान्ता बेजवाडा विल्सन र अभिनेता अनुप सोनी आएको केबीसीको पछिल्लो एपिसोडमा सोधिएको एक प्रश्नले हिन्दू भावनामा चोट पु¥याएको आरोपमा लगाउँदै लखनउमा एफआईआर दर्ता गरिएको हो । सन् १९२७ डिसेम्बर २५ मा डा. बीआर अम्बेडकर र उनका अनुयायीहरूले कुन शास्त्रपदको प्रतिलिपिहरु जलाएको भन्दै ६ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको प्रश्नमा सोधिएको थियो ।
जवाफको अप्सनमा विष्णु पुराण, भागवत गीता, ऋग्वेद र मनुस्मृति राखिएको थियो । प्रश्नको उत्तर मनुस्मृति हो । मनुस्मृतिबारे बोल्दै अमिताभले डा. बीआरले कसरी हिन्दू धर्मशास्त्र मनृस्मृतिको प्रतिलिपि जलाएको भन्दै वर्णन गरेपछि हिन्दू धर्मावलम्बीले हिन्दूहरूको भावनामा चोट पुगेको भन्दै एफआईआर दर्ता गराएका हुन् ।